I-Bitcoin Cash yintoni kwaye uthenge njani? Iinkonzo kunye neengozi ngeBitcoin | Iindaba zeGajethi
I-Bitcoin Cash yintoni kwaye uthenge njani?
UGuillermo Mancho | | Imali engezantsi yedijithali
I-Bitcoin Cash Yimali yedijithali eyazalwa ngaphambili Agasti 1, 2017 ukusuka Bitcoin ukuya zama ukusombulula iingxaki zokukhula kweBitcoin yoqobo. Okwangoku yenye yezona ndawo zidumileyo zemali ezinexabiso eliphezulu kakhulu kwimarike eliyibeka kwindawo ye-3 kwisikhundla se-crypto, kuphela emva kwe-Bitcoin kunye ne-Ethereum. Ngaphandle kobomi bayo obufutshane, iBitcoin Cash inoluntu olomeleleyo emva kwayo kwaye kukho abantu abathile abathi kwixa elizayo izakuba yeyona ibalulekileyo, ishiye iBitcoin yoqobo kwindawo yesibini ngenxa yeengxaki zayo. Ke ngoko, ipheUkuqonda ukuba yintoni i-Bitcoin Cash, kufuneka siqale siqonde yintoni kwaye ivelaphi i-bitcoin.
1 Imvelaphi yeBitcoin
2 Imbali yemali ye-bitcoin
3 Uyithenga njani imali ye-bitcoin
4 Izibonelelo zemali ye-bitcoin
5 Iingxaki zemali zeBitcoin
6 Imali ye-Bitcoin vs bitcoin
7 Isicatshulwa semali seBitcoin
I-Bitcoin yenziwe ngokungaziwa ngumntu okanye iqela labantu phantsi kwegama "Satoshi Nakamoto". LInjongo yalo mntu okanye iqela labantu yayikukwenza indlela yokwabela abaphantsi amagunya okuthumela nokufumana imali kusetyenziswa itekhnoloji eyaziwa njenge blockchain okanye ikhonkco leebhloko. Umdali weBitcoin "uSatoshi Nakamoto" uphumeze uthotho lwemithetho kwiBitcoin, omnye wabo kukuba akunakubakho ngaphezulu 21 yezigidi Iiyunithi Ngelixa elinye inyathelo yayikukuba wenze kwaye uvelise ezo Bitcoin ekuphela kwendlela yayikukusebenzisa ezabo software free ukunceda ukusombulula imicimbi eveliswe ngokukhuselekileyo. Xa umsebenzisi ethumela iBitcoin kwenye, oku kufuneka ahlawule ikhomishini (umrhumo) wokufaka igalelo kwinethiwekhi; inethiwekhi iya kuba ziikhompyuter eziqhuba le software ethile ukuze intengiselwano yenziwe ngokuchanekileyo. Ezi khompyuter kunye / okanye oomatshini babizwa "Abavukuzi" kwaye nabani na emhlabeni onekhompyuter kunye noxhumano lwe-intanethi ingangumgodi.
Ngale ndlela akuyi kuba yimfuneko ukusebenzisa imibutho esembindini, urhulumente okanye iibhanki onokuzithemba ekubeni wena ngokwakho uya kuba noxanduva kunye nomnini wedwa weeBitcoins zakho. Ewe, obu buchwephesha yenziwe ngo-2008 ibinemida ethile; Ngenxa yoku kusikelwa umda, amaqela amaninzi wabadwelisi beenkqubo avele ngenjongo yokuphucula kunye nokukhulisa le mida yeBitcoin.
Amanye amaqela amakhulu abantu ayenziwa nabo bazinikezela ekufakweni nasekusekeni iifama ezinkulu zeemigodi zeBitcoin. Oku kuyakunceda abatsha ukuba baqonde apha ngezantsi ukuba yintoni kwaye yenziwa njani i-Bitcoin Cash. Kwaye emva koko siza kubona amanyathelo ekufuneka siwalandele ube nakho ukuthenga i-Bitcoin Cash ngokukhuselekileyo.
Sithe i-Bitcoin yenziwa ngokungaziwa kwaye zombini iprojekthi kunye nesoftware zikarhulumente; Oku kuthetha ukuba nabani na angayiguqula, ayiphucule kwaye ongeze amanqaku amatsha. Kodwa ke ukuze olu phuculo luphunyezwe kufuneka bamkelwe sisininzi “sabavukuzi” ekufuneka behlaziye bekhuphele le mpucuko, ekuthiwa ekuhlaleni "isivumelwano" Kwaye lolunye lweempawu eziphambili zetekhnoloji ye-blockchain.
Xa umsebenzisi esenza intengiselwano le igcinwe kwi ibhlokhiIbhloko nganye inobungakanani obumiselwe kwangaphambili be-1MB kwaye iyakwazi ukugcina inani elithile lokuthengiselana, ezi bhloko zenziwa ngokuzenzekelayo ngalo lonke ixesha le-X, endaweni yexesha elichazwe kwangaphambili.
Enye yeengxaki eziphambili zeBitcoin ivela xa ithandwa kwaye inani leetransekshini landa kakhulu. Ke ukungqubana okuthile kuvela kwindawo yaseBitcoin malunga nendlela yokujongana nale ngxaki. Iziphumo zale ngxaki zichaphazela intengiselwano, njengoko zininzi kakhulu, zingena kwimeko yokulinda apho ziqokelela khona ngokusekwe kwikhomishini ehlawulwe ngumsebenzisi xa esenza loo nto. Xa oku kusenzeka, iikhomishini ziyonyuka (ngokunyusa iindleko zenethiwekhi) kunye nexesha elithathwayo lokuqinisekisa ukuthengiselana kukonyuka kakhulu ngelixa intengiselwano kunye neekhomishini eziphezulu ziya kukhetha ezinye.
Apha kuvela eyona ngxaki apho uluntu lwaseBitcoin lwahlulwe kwaye umlo "wemidla" uqala phakathi kwabavukuzi kunye nabaphuhlisi beBitcoin.
Ukuqonde oku sinokuchaza ukuba yintoni yintoni Ifolokhwe enzima. Ifoloko enzima yisahlulo se-blockchain ephambili eya kuba yiBitcoin. Oku kwenzeka xa izindululo zokuphucula zingamkelwa kwaye abasebenzi basezimayini abaxhasa inethiwekhi yeBitcoin bohlulwe. Kuphela emva koko unokwenza imali yesibini yedijithali kwityathanga lasekuqaleni elinokuba yiBitcoin, kwaye le yindlela i "Bitcoin Cash" eyavela ngayo. Ukukuqonda oku ngendlela ebonakalayo ngakumbi, kuya kufuneka ubone lo mfanekiso ulandelayo:
Bitcoin Cash ifolokhwe
Inokuba kunjalo zilungile okanye zimbi, Kuxhomekeka kwindlela ojonga ngayo. Xa i Imfoloko Hard ngokwenene kwenzeka ntoni kufuneka yenziwe kukukhonkxa. Ke, abasebenzi basezimayini abaxhasa ikhonkco elitsha bafaka idatha yekhonkco lokuqala kwikhonkco elitsha elihlaziyiweyo kunye nophuculo olusetyenzisiweyo, ngalo naliphi na umsebenzisi oneBitcoin kwisipaji sakhe (isipaji) azakufumana ngokuzenzekelayo nangokukhululekileyo kwi-Bitcoin Cash , ngoku ngoku emva kwemfoloko enzima uya kuba ne-bitcoin kunye nemali ye-bitcoin.
Imbali yemali ye-bitcoin
Imbali ye I-Bitcoin Cash Imfutshane kakhulu ukusukela oko Nge-Agasti 1 esuka kwi-2017 ivela kwiingxaki zokungazinzi kunye nokungaqondi koluntu olukhankanywe apha ngasentla, nangona ukuba sithathela ingqalelo iminyaka uluntu lwaseBitcoin oluxoxa ngayo ngale micimbi, imbali yeBitcoin Cash ibuyela umva kakhulu.
Uyithenga njani imali ye-bitcoin
Ukufumana i-Bitcoin Cash sinokuyenza ngeendlela ezininzi, eyona ilula iya kuba bhalisa kwaye uvule i-akhawunti kolunye lotshintshiselwano oluphambili. Umzekelo singasebenzisa nayiphi na kwezi zilandelayo:
Nje ukuba senze iakhawunti kuya kufuneka iqinisekise ngokunika isazisi okanye incwadana yokundwendwela kunye nobungqina bedilesi kunye nerisithi yebhanki.
Emva kokuqinisekisa iakhawunti yethu kufuneka dlulisa imali ebhankini ukusuka kwiakhawunti yethu ukuya ebhankini kubonise ngesazisi esikhethekileyo osibonelelayo kwiakhawunti yakho yokutshintsha.
Xa sele sinayo imali kwiakhawunti yethu sinetyala kuphela yenza ukuthengwa kwiqonga lakho lewebhu kwaye sitshintshe i-euro yethu kwi-Bitcoin Cash kwaye siya kuba notyalo-mali lwethu.
Izibonelelo zemali ye-bitcoin
Izibonelelo eziphambili zeBitcoin Cash zimbalwa ngokuthelekiswa neBitcoin yoqobo, ukuthengiselana ngokukhawuleza nge iindleko eziphantsi kakhulu kunye ne-scalable.
Oku bakwazile ukwandisa ubungakanani bebhloko nganye ukusuka kwi-1MB ukuya kwi-8MB inokutshabalalisa ukuya kuthi ga kwi-32MB ngaphandle kwemfoloko eyongezelelweyo evumela ukuthengiselana phakathi kwe-23 kunye ne-92 ngomzuzwana xa kuthelekiswa ne-3-7 tx / s (intengiselwano ngomzuzwana) evumela iBitcoin yoqobo.
Iingxaki zemali zeBitcoin
Enye yeengxaki eziphambili zeBitcoin Cash yile Ubungakanani bebhloko eyi-8MB kwaye ngoba? Ewe, kuba oko kuthetha utyalo-mali olubalulekileyo koomatshini bokugcina abasebenzi basezimayini abanegalelo kwinethiwekhi, enokuthi ibabuyisele umva, abanokukhetha ukuxhasa inethiwekhi yoqobo ye-1MB apho kungafunekiyo ukwenza utyalomali olutsha.
Enye ingxaki kukuba abasebenzisi abasebenzisa iBitcoin ukungathembi inqanaba lokwamkelwa Oko kunokuba ne-Bitcoin Cash ngenxa yexabiso eliphezulu ekuya kufuneka ligcine uthungelwano lwayo, kuba oku kunokwenza ukuba inethiwekhi ye-Bitcoin Cash ihlale kuphela ezandleni zabambalwa abanamandla abanemali eyaneleyo yokujongana nayo kwaye ngale ndlela ilawulwe Iqela elincinci labantu abaza kuba nolawulo oluninzi lwenethiwekhi, ngelixa inethiwekhi yoqobo yeBitcoin isasazwa ngakumbi kwaye ngenxa yoko kunzima ngakumbi ukuyilawula kunye nokwenza indawo enye.
Imali ye-Bitcoin vs bitcoin
Umboniso uhanjisiwe, iBitcoin Cash ikwazile ukuzibeka okomzuzwana indawo yesibini kwimali yentengiso emva kweBitcoin. Okwangoku, ukusuka kumhla weli nqaku, kukwindawo yesithathu kwaye imeko imi ngolu hlobo lulandelayo:
Umlo uyaqhubeka kwaye uya kuhlala ujikeleze uninzi ukusukela Uluntu lwaseBitcoin lukhulu kakhulu kwaye njengokuba abasebenzisi abatsha besazi i-blockchain kwaye babe nomdla kwii-cryptocurrensets, into yokuqala abayenzayo kukutyala imali kwi-Bitcoin endaweni ye-Bitcoin Cash, kuba yeyokuqala kunye nokumkanikazi wabo bonke. Ngaphakathi komphathi wokuqala weBitcoin, iBitcoin Cash unokuba ngumncintiswano ofanelekileyo Ngenxa yabatyali mali abakhulu ngasemva kwayo kunye neempawu zayo eziluncedo ezinentengiselwano ekhawulezayo nengabizi kakhulu, kodwa le yingxaki ezinye ii-cryptocurrensets ezibaluleke kakhulu esele zisonjululwe kwangoko njenge-Ethereum, ehlala kwindawo yesibini kwimali yentengiso, ungayibona umfanekiso wangaphambili. Esimele sizibuze ngayo ukuba kutheni mna okanye nawuphi na omnye umsebenzisi etyala imali okanye athenge i-Bitcoin Cash xa i-Ethereum ikhawuleza kwaye ingabizi? Ngenxa yoku, uninzi lwabantu luthatha isigqibo sokutyala imali kwi-Bitcoin kuba ikumkanikazi njengevenkile yexabiso kunye nokusebenzisa ezinye iimali zedijithali ezinje nge-Ethereum ukwenza imicimbi kunye nokuhambisa.
Isicatshulwa semali seBitcoin
Umzekelo wetshathi weBitcoin Cash
Ekusungulweni kwayo, i-Bitcoin Cash yaqala ukurhweba ngaphezulu kwe- $ 500, emva koko yahamba phakathi kobuncinci be- $ 200 kunye ne- $ 2.500 ephezulu, ngomhla wokudalwa kweli nqaku iBitcoin Cash ithengisa ngexabiso leedola ezili-1.248. Ukuba ufuna ukubona ixabiso ngexesha lokwenyani kufuneka ngenisa eli khonkco.
Kwindawo yentengiso engazinzanga, encinci kwaye engalindelekanga kwaye eguqukayo asazi ngokuqinisekileyo ukuba intengiso izakuyaphi, kodwa kwelam icala ndicinga ukuba nantoni na inokwenzeka, ke eyona nto intle endiyicingayo kwinqanaba lomntu iya kuba kukubheja kokubini kunye nokubona njengoko kusenzeka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Te knoloji » Imali engezantsi yedijithali » I-Bitcoin Cash yintoni kwaye uthenge njani?
UJose Luis Ureña Alexiades sitsho
Ii-cryptocurrensets, ezinje ngeBitcoin, ziindawo zokurhafisa efini, kunye nomzekelo wegazi lokuqikelela okungenamveliso.
Phendula kuJose Luis Ureña Alexiades
UGoogle uhlaziya isithethi sayo seKhaya laseKhaya likaGoogle ngokwenza ukuba isebenze kwakhona